Home Wararka Ciyaaraha Liverpool oo u aqoonsatay xiddiga La Liga inuu yahay bedelka mustaqbalka ee...
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo weeraryahanka reer Sweden Alexander Isak xagaagaan.
Isak ayaa wacdaro dhigay intii lagu guda jiray furitaankii qarankiisa ee Euro 2020 ee ay wajaheen Spain. Wuxuu sidoo kale ku riyaaqay xilli ciyaareed qurux badan oo 2020-21 ah ee Real Sociedad ee La Liga.
Sida laga soo xigtay Express , tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa doonaya inuu la soo wareego bedelka mustaqbalka fog ee weeraryahanka reer Brazil Roberto Firmino. Firmino wuxuu u adkeystay olole adag 2020-21, intii lagu jiray mudadaas oo uu ku guuleystay inuu dhaliyo kaliya sagaal gool 48 kulan oo uu u saftay Reds.
Qaab ciyaareedka liita ee Sadio Mane iyo Firmino xilli ciyaareedkan, oo ay weheliso la’aanta xulashooyin tayo leh oo keydka fadhiya, ayaa ku qasbay Klopp inuu ka fiirsado saxiixa xoojinta weerarka xagaagan.
Isak ayaa si deg deg ah ugu soo baxay mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican La Liga tan iyo markii uu kaga soo biiray Real Sociedad kooxda Borussia Dortmund sannadii 2019. Ka dib laba xilli ciyaareed oo uu la qaatay kooxda reer Jarmal, muddadii uu ku dhibtooday inuu ku soo bilowdo line-upka kooxda, Isak wuxuu ku biiray Sociedad isagoo rajo ka leh inuu ciyaaro. kubada cagta ee joogtada ah.
Ka dib markii uu si gaabis ah ugu bilaabay nolosha Isbaanishka, Isak wuxuu si dhaqso leh xubin muhiim ah uga noqday kooxda . Waxa uu dhaliyay 16 gool 45 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan intii lagu jiray xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee kooxda. Xiddiga reer Sweden ayaa horumar ka sameeyay goolashiisa xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay toddobo iyo toban gool 34 kulan oo uu saftay La Liga isagoo ku hogaamiyay Real Sociedad kaalinta shanaad ee La Liga.
Liverpool ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato weeraryahan xagaagan, laakiin waxay u badan tahay inay tartan adag kala kulmaan Barcelona. Catalans ayaa sidoo kale lagu xamanayaa inay xiiseynayaan saxiixa Alexander Isak.
Previous articleCroatia oo bar-baro ay galeen Czech Republic ugu soo baxay Wareega 16-ka Euro 2020
Next articleRio Ferdinand ayaa amaanay sida ay Real Madrid ula dhaqantay halyeeyada kooxda kadib xafladii sagootinta ee Sergio Ramos